အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု Sioux ရေတံခွန်, ငါ့ကိုအနီး SD ကလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
Sioux ရေတံခွန် မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု, Rapid City,, အနီး SD က
ထိပ်တန်းဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း Sioux ရေတံခွန်, ငါ့ကိုခေါ်ဆိုခအနီးတောင်ဒါကိုတာလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ 877-647-9100 အချည်းနှီးသောခြေထောက် Air လေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်. အဘယ်သူသည်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာတစ်ဦးစီးနင်းယူကိုချစ်မှာမဟုတ်ဘူး? ယခုမူကား, အဲဒီအကြောင်းအိပ်မက်ကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ပေါ်မှာစီစဉ်စတင်ရန် ပို. ပင်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်.
တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်အများအားဖြင့်ဇိမ်ခံနှင့်ဆက်စပ်နေသည်, နှင့်ဇိမ်ခံနှင့်အတူ, တစ်ဦးကြီးမားကျယ်ပြစျေးနှုန်း. ဒါပေမယ့်သင်ကအဓိကလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးသည်းခံရပါမယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ, ကုန်ကျစရိတ်တော့ဘူးရောက်ရှိဖို့ထဲကရှိသမျှသောအဝေးမထင်ထားဘူး.
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပျံသန်းမှုဤသည်နေ့ရက်ကာလကိုမကြာခဏခရီးသွားများအတွက်တားဆီးရန်အဖြစ်သူတို့ကိုဖျက်များစွာကိုဆုတ်ယုတ်မှုများ. ရုံ check-in လိုင်းများမှာအပေါ်ပုံရတဲ့စောင့်ရှောက်ကြောင်းလုံခြုံရေးအပိုအလွှာနှင့်အတူ, သင်လေယာဉ်ပေါ်လိုအပျနိုငျသောအရာကိုယူဆောင်လာနိုင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်း, အဖြစ်ကျဉ်းကျုတ်ရပ်ကွက်အတွက်မကြာခဏမြောက်မြားစွာကအခြားခရီးသည်များနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိခြင်း, ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကိုတောင်ပိုကောင်းကြည့်ဖို့စတင်သည်.
သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မဆို destination သို့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှား Sioux ရေတံခွန်တောင်ဒါကိုတာလေယာဉ်ဝန်ဆောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်နိုင်, ရှည်လျားသောလိုင်းများနှင့်တင်းကျပ်သောလုံခြုံရေးအစီအမံများလုပ်ရတဲ့မပါဘဲ. တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်သင်ပိုမိုအဆင်ပြေကမ်းလှမ်း, privacy ကို, နှင့်စိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်အချိန်ပေါ်တွင်သင်၏ဦးတည်ရာကိုရကြလိမ့်မည်ဟုသိမှတ်နှင့်မကြာခဏရှည်လျားလိုင်းများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်ရှိခြင်းနှင့်တစ်ဦးချိတ်ဆက်ပျံသန်းအောင်မပါဘဲ.
သငျသညျလမျးလှဲမရှိဘဲသင်၏ destination သို့ဖြောင့်ပျံသန်းနိုင်သည်, နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ကွင်းသို့, သငျတို့သတဲ့သေးငယ်လေယာဉ်များကိုအသုံးပြုနေကတည်းကသင်မကြာခဏကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်ပါသည်သောရေအလွန်ထူထပ်သည့်အဓိကလေဆိပ်များကိုရှောင်ရှား.
Sioux ရေတံခွန်တောင်ဒါကိုတာရှိငှားတစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်တစ်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်တတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုရန်သင့်အားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုငါပေးမည်. ပိုပြီးအိတ်ကိုနှင့်အတူပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်အဘယ်သူမျှမ, အဘယ်သူမျှမကပိုဖွင့်လုံခြုံရေးမှတဆင့်ရရန်သင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်မတိုင်မီနာရီအတွင်းစစ်ဆေးနေ, နောက်တဖန်ဆူညံသံအဆင့်နှင့်စကားများသောအားဖြင့်စီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပေါ်မှလူအစုအဝေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်မကြာခဏငို. သငျသညျစိတျငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့နှစျသိမျ့အတွက်သွားလာနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျဖို့လိုအပျလြှငျအသငျသညျထကျအရနှင့်သင့်ခြေထောက်ဆန့်နိုင်ပါတယ်, နားကြပ်ခြင်းမရှိဘဲသင်အကြိုက်ဆုံးတီးလုံးကိုနားထောင်, သို့မဟုတ်သင့်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ကြည့်ရှု. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ Laptop ကိုအဖြစ်လေယာဉ်ပေါ်သို့သငျနှငျ့အတူသငျသညျလိုအပျသောအရာတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့နှင့်မြန်နှုန်းမြင့် Wi-Fi access ကိုရှိနိုင်ပါသည်, မကြာခဏစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုများအတွက်အပိုကောက်ခံသာသတ်မှတ်ထားသောအချိန်များတွင်ခွင့်ပြုပါဖြစ်စေကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို.
သငျသညျစိတျငွိမျမှေ့လျြောပါလျှင်, privacy ကို, သငျတို့သအံ့သြစေခြင်းငှါလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ခရီးသွားလာငါ Sioux ရေတံခွန်တောင်ဒါကိုတာအနီးရှိနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်လေယာဉ်တင်သဘောတူညီမှုစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်? သငျသညျတတ်နိုင်စျေးနှုန်းများမှာကဤအပေးအယူမျိုးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအများကြီးပိုစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်. သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားဂျက်လေယာဉ်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတတ်နိုင်မှာအံ့အားသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း. အဆိုပါကူညီပြီးနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘဲပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ခရီးစဉ်ရှိခြင်း၏အဆင်ပြေစေရန်, မကြာခဏခရီးသည်တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာငွေပမာဏနှင့်အတူ, သငျသညျစိတျငွိမျးခမျြးရေးကိုခံစားနိုင်ပါတယ်, သက်သာခြင်း, နှင့်ဇိမ်ခံကားကောင်းကောင်းသင့်ရဲ့လက်လှမ်းမမီအတွင်းကြောင်း.
ထို့အပြင်ဂျိုး FOSS ကွင်းဆင်းလေကြောင်းအဖြစ်လူသိများဂျက်ယင်ကောင်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေဆိပ်များစာရင်း Sioux ရေတံခွန် ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ Minnehaha ကောင်တီ
Sioux ရေတံခွန်, Rowena, Renner, Brandon, ကှေးသော, လက်ဖက်ရည်, Harrisburg, ဘောလ်တစ်, Hartford, ချိုင့် Springs, လီယွန်, Garretson, အကြီးအမှူး, တန်ဘိုး, Lennox, Larchwood, Beaver အဘိဓါန် Creek အဘိဓါန်, Humboldt, တောင်ကုန်း, Dell က Rapids, Canton, Colton, မျ့ဘဲလျ, Inwood, က Parker, Davis က, မွန်ရိုး, Steen, Trent, Alvord, Montrose, Luverne, Chester, Canistota, နဂါး, Fairview, Hurley, မာရီယန်, ရော့ခ် Rapids, Hardwick, Ihlen, Egan, Colman, Hudson, Kanaranzi, အဲဒီမှာ, Wentworth, Viborg, ရော့ခ်ချိုင့်, Centerville, ပျက်ယွင်းသောအတိုအစ, Beresford, Magnolia, Flandreau, လမ်, Kenneth, Madison, Bridgewater, Pipestone, Edgerton, အခွံ, RUTLAND, ဂျော့ခ်ျ, Adrian, Freeman က, Leota, Hawarden, အိုင်ရင်း, Alcester, Ellsworth, Wakonda, Lismore, Little ကရော့ခ်, Sioux ရေးစင်တာ, Nunda, Winfred, Boyden, Spencer, Chandler, Emery, Ireton, Matlock, Canova, Chatsworth, ဟော်လန်, Volin, Woodstock, Rushmore, Ramona, Menno, Wilmont, Elkton, မောရစ်, ဆိုင်းနိုင်း, Ashton က, aurora, လိမ္မော်ရောင်စီးတီး, Volga, မစ်ရှင်ဟေးလ်, Sheldon, Sibley, Burbank, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Brookings, ရေကန် Wilson က, Gayville, အာလေဇန္, Bigelow, လှငျ, Meckling, Howard, Akron, စာဖတ်ခြင်း, Vermillion, Iona, ရေကန် Benton, ဥတီဂ်, Hospers, Ruthton, အော်တန်, Oldham, Lesterville, မျှော်လင့်ချက်, Brunville, Worthington, Yankton, Fulton, ဆတ်ပွိုင့်, Slayton, စိန့်ဟယ်လီနာ, Tyler, Westfield, စကော့တလန်, Granville, Melvin, လေးသမား, Wynot, le အင်္ဂါဂြိုဟ်, Sanborn, Arlington, အဖြူ, Fulda, Ocheyedan, Kaylor, Oyens, Maskell, Fedora, Parkston, Balaton, Merrill, ဘရုစ်, Avoca, နယူးကာဆယ်လ်, ရေကန် Preston, Ethan, တာဗော်, Brewster, ကားသေ့ချြ, စယ်, Arco, Fordyce, Primghar, မေလစီးတီး, Tripp, Harris က, Mitchell က, Dimock, Garvin, Remsen, Crofton, Paullina, round ရေကန်, ဟင်း, Hendrick, ဂျက်ဖာဆန်, တဟာရှ, အိုင်ဗင်ဟိုး, Dovray, Hartley, -Ponca, တင်ဒေး, Astoria, Hartington, တိုရွန်တို, Hinton, de Smet, Lynd, Marcus, အဆိုပါ bioequivalence, ရေကန်ပန်းခြံ, Estelline, Heron ရေကန်, Artesian, Sioux City, North Sioux City, Calumet, Erwin, Tracy, ရေကန် Norden, Westbrook, Delmont, Letcher, ဆပ်သာလန်, Everly, Meriden, Cleghorn, Brandt, Avon, Larrabee, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, Kingsley, Coleridge, တောင်ပေါ်မှာ Vernon, Allen က, Dixon က, Springfield, တောင်ပိုင်း Sioux City, မာရှယ်, ဂျန့်မြို့မှာ, Lawton, Storden, Bloomfield, Taunton, walnut Grove, တံခါးစောင့်, Iroquois, Bryant, Minneota, တော်ဝင်, Pierson, Dante, ခြာရိုကီ, Peterson, ရို, Movil, Cavour, Milroy, Wausa, Washta, သံလိုက်, Quimby, Lamberton, Niobrara, အလယ်ဗဟို, လင်း Grove, Lucan, မိုးမခရေကန်, Aurelia, Correctionville, Cottonwood, ယေးလ်, Vesta, Wanda, ကုရှ, Huron, မြင့်သော, Wabasso, Holstein, Seaforth, သစ်သားရေကန်, Verdigre, Winnetoon, Creighton, လက်သမား, ပဲ့တင်သံ, ဦးခေါင်း, Belview, Schaller https://www.sfairport.com/
အလုပ်အမှုဆောင်ဇိမ်ခံဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား Rapid City,
Tennessee ပြည်နယ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုနောဖပြည်၌, TN လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ
Private Jet Air Charter Flight Cedar Rapids, Davenp သို့မဟုတ် t, အိုဝါလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်း
Embraer အမွေအနှစ် 650 လေယာဉ်လေကြောင်းပြည်ထဲရေးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု